brf3_clay | baref17t
MNS/WMNS: 35 - 44
Consideringanew texture and far more different colorways. sizing both men & women. it's an ideal to refresh our wardrobes - "a velvet on an elevated sole."
မှနျကနျသောအရှယျအစားမြား ရရှိနိုငျရနျအတှကျ ယခုဖျေါပွပါ size table ကို အသုံးပွုပေးပါရနျ လေးစားစှာမတ်ေတာရပျခံအပျပါတယျ။ မိမိတို့လကျရှိ အသုံးပွုလြှကျရှိသော ဖိနပျအောကျခံ-sole၏ အရှယျအစားကို centimetre (cm) စငျတီမီတာဖွငျ့တိုငျးထှာပေးပါ။ ရရှိလာသောအရှယျအစားကို "Sole Length" တှငျကွညျ့ရှု့ပေးပါ။ (ဥပမာ - ဖိနပျအောကျခံ-sole၏ အရှယျအစား 26cm သညျ EUR size 38 ဖွဈပါသညျ။ Size ၃၈ ဖွငျ့မှာယူပေးပါ။)
မှန်ကန်သောအရွယ်အစားများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ယခုဖေါ်ပြပါ size table ကို အသုံးပြုပေးပါရန် လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့လက်ရှိ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဖိနပ်အောက်ခံ-sole၏ အရွယ်အစားကို centimetre (cm) စင်တီမီတာဖြင့်တိုင်းထွာပေးပါ။ ရရှိလာသောအရွယ်အစားကို "Sole Length" တွင်ကြည့်ရှု့ပေးပါ။ (ဥပမာ - ဖိနပ်အောက်ခံ-sole၏ အရွယ်အစား 26cm သည် EUR size 38 ဖြစ်ပါသည်။ Size ၃၈ ဖြင့်မှာယူပေးပါ။)
SOLE LENGTH (in cm)
Size ပွနျလညျလဲလှယျယူလိုပါက facebook messenger မှသျောလညျးကောငျး၊ ဖုနျးနံပါတျ 09-792 904 790 သို့မဟုတျ barefootmyn@gmail.com သို့ ပစ်စညျးလကျခံရရှိပွီး ၂၄ နာရီအတှငျး အကွောငျးကွားပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။ အစှနျးအထငျးမြားနှငျ့ ညဈပေးခွငျးမြား မရှိရနျနှငျ့ အထူးဂရုပွုပေးပါရနျ လေးစားစှာ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
ဖိနပျမြားလဲလှယျခွငျးသညျ delivery-charges ကုနျကစြရိတျမြားရှိပါသညျ။ Barefoot မှ return & exchange တဈကွိမျသာလဲလှယျခှငျ့ပွုထားပါသညျ။ မှနျကနျသော ဖိနပျအရှယျအစား ရှေးခယျြရနျ Size Chart တှငျ စဈဆေးရှေးခယျြနိုငျပါသညျ။
Size ပြန်လည်လဲလှယ်ယူလိုပါက facebook messenger မှသော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် 09-792 904 790 သို့မဟုတ် barefootmyn@gmail.com သို့ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း အကြောင်းကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အစွန်းအထင်းများနှင့် ညစ်ပေးခြင်းများ မရှိရန်နှင့် အထူးဂရုပြုပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဖိနပ်များလဲလှယ်ခြင်းသည် delivery-charges ကုန်ကျစရိတ်များရှိပါသည်။ Barefoot မှ return & exchange တစ်ကြိမ်သာလဲလှယ်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ မှန်ကန်သော ဖိနပ်အရွယ်အစား ရွေးချယ်ရန် Size Chart တွင် စစ်ဆေးရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
baref17t မှ ဖိနပျမြားကို မွနျမာပွညျအတှငျး အိမျအရောကျပို့စနဈဖွငျ့ အခမဲ့ (issued on Jul-2018) ပို့ဆောငျပေးပါသညျ။ နယျမွို့မြားအတှကျ မိမိတို့ရှေးခယျြသညျ့ ကားဂိတျသို့ပို့ဆောငျပေးပါသညျ။ Delivery Process: 4-5 working days / order မှာယူပွီး ၄ ရကျမှ ၅ ရကျအတှငျး လကျခံရရှိနိုငျပါသညျ။ ပိုမိုမွနျဆနျစှာမှာယူရနျ facebook messanger မှ တဆငျ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
Delivery process ပိုမိုမွနျဆနျအဆငျပွစေရေနျ အတှကျ မှာယူသူမှ မိမိတို့၏ အမွဲတမျးနရေပျလိပျစာနှငျ့ ဆကျသှယျရနျဖုနျးနံပါတျတို့ကို မှနျကနျစှာ ဖွညျ့စှကျပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
baref17t မှ ဖိနပ်များကို မြန်မာပြည်အတွင်း အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ (issued on Jul-2018) ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ နယ်မြို့များအတွက် မိမိတို့ရွေးချယ်သည့် ကားဂိတ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Delivery Process: 4-5 working days / order မှာယူပြီး ၄ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမှာယူရန် facebook messanger မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Delivery process ပိုမိုမြန်ဆန်အဆင်ပြေစေရန် အတွက် မှာယူသူမှ မိမိတို့၏ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
MPU-transfer / ကဒျအသုံးပွု၍ငှလှေဲပေးခွငျး (သို့မဟုတျ) Cash on delivery / ပစ်စညျးလကျခံရရှိခြိနျမှငှပေေးခခြွေငျး - ဝယျယူသူမှ နှဈသကျရာ ငှပေေးခခြွေငျးစနဈဖွငျ့ ဝယျယူရရှိနိုငျပါသညျ။
ယခုငှပေေးခမြှေုစနဈသညျ Offile Payment - Cash on delivery စနဈဖွငျ့သာ လကျခံကွောငျးကွိုတငျအသိပေးအပျပါသညျ။ MPU စနဈဖွငျ့ ငှပေေးခလြေိုပါက Messenger မှတဆငျ့ ဆကျသှယျပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။
MPU-transfer / ကဒ်အသုံးပြု၍ငွေလွှဲပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) Cash on delivery / ပစ္စည်းလက်ခံရရှိချိန်မှငွေပေးချေခြင်း - ဝယ်ယူသူမှ နှစ်သက်ရာ ငွေပေးချေခြင်းစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခုငွေပေးချေမှုစနစ်သည် Offile Payment - Cash on delivery စနစ်ဖြင့်သာ လက်ခံကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ MPU စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေလိုပါက Messenger မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Taking inspiration from the 70’s original sport trainers, we wanted to createamasterpiece, merging the perfection ofaclean minimal design with superior materials and the highest craftsmanship standard.
The result? A wardrobe staple.
We believe that great design is what makes anything look simple and graceful. Starting from simple shapes that carefully balance beauty and functionality, we work extensively on materials, pursuing an harmonious blend of colour, tone and texture.
Essential means for us: beautiful, functional, iconic.
We have designedarevolutionary efficient and agile production model that, starting from the selection of raw natural materials, allows us to create true value and limited product runs.
We emphasise made-to-order in our mission to replace excess with quality, individuality, and sustainability.
©2018 by baref17t, Mandalay | Myanmar